Chibvumirano Mutemo | Law & More BV
Wese muzvinabhizimusi kana akazvimiririra anga ari pasi pemutemo wechibvumirano kamwechete. Kunetsana kwakanangana nekududzirwa kwechibvumirano, mubvunzo kana zvibvumirano zvese zvakaradzikwa muchibvumirano zvazadzikiswa nemazvo, uye mhedzisiro yekuzadzikiswa zvisina kunaka ndiko kurongeka kwezuva.
UNODA KUBATSIRA UYE KUKONZESESA ISANGANO?
Iwe unoda here rubatsiro nekunyora chibvumirano? Ko zvibvumirano zvakaitwa kuti hazvisi kucherechedzwa uye unoda kumisa chibvumirano here? Kana iwe une kukakavara kwakamuka kubva pakuguma kwesungano? Tichafara kubatira.
• kunyora chiziviso chakanyorwa chekuzeya nyaya yekusaita chibvumirano;
• kugadzirisa kupokana kwakamuka kubva pakupera kwechibvumirano;
• kutaurirana nezve zvemukati zvibvumirano.